Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Tom Davies Childhood Akụkọ gbakwunyere Ihe Na-adịghị Eke Ahụ Eke Ndụ
Tom Davies Biography na-agwa gị eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Cgbọala, Ezigbo Net, Ndụ na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị ọkachamara n'asụsụ Bekee, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị dịkwuo mma, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Tom Davies 'Bio.
Tom Davies Nwatakiri Akụkọ - Lee Oge Nmalite Ya na Bilie.
Ee, onye ọ bụla maara Davies bụ otu n'ime etiti etiti ndị mara mma na bọọlụ Bekee.
Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle mbipụta anyị nke Tom Davies 'Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Tom Davies Storymụaka Akụkọ:
Tom Davies Nwatakiri Akụkọ- Lee echiche doro anya banyere foto nwata.
Malite, aha ya zuru oke Tom “Thomas” Davies. A mụrụ Tom na 30th nke June 1998 na nne ya Daine Davies (onye na-edozi ntutu isi) na nna, Tony Davies (onye ọrụ gọọmentị) n'obodo Liverpool.
Igwe kpakpando a etolitere na nwanne ya nwoke nke okenye Liam na ya na nne na nna ha zụlitere na West Derby.
Ọ bụrụ na ị maghị?… West Derby bụ mpaghara nwere mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Liverpool, England.
Tom Davies Ezinụlọ:
Ezinụlọ Tom Davies sitere na agbụrụ Liverpool nke si na England na-asụ asụsụ bekee.
Merseyside amụrụ onye etiti etiti nwere ezinụlọ ya si Liverpool, obodo ama ama ama ama ama na UK na northwest England.
Ọ bụ a obodo nwere kasị adọrọ mmasị ịnakọta nke ngosi ihe mgbe ochie na Europe. Ọzọkwa, ọ bụ nke mbụ nwere ụzọ ụgbọ okporo ígwè mbụ nke ụwa.
Tom Davies tolitere n'ezinaụlọ, ya na ọtụtụ ndị ezinụlọ ya bi na Liverpool nke West Derby.
Inwe nne nke na-edozi ntutu isi na nna nke na-akwụ ụgwọ n'etiti ụlọ na-egosi na nne na nna Tom Davies nwere ntụsara ahụ.
Tom Davies 'Early Life with Football na Mmụta:
N'oge ọ bụ nwata, nne na nna Tom Davies debanyere aha ya n'ụlọ akwụkwọ Merseyside dị na mpaghara, nke gbara ụmụ akwụkwọ ha ume isonye na egwuregwu bọọlụ asọmpi.
Dị ka Telegraph, obere Tom (nke e sere n’okpuru ebe a) bụ nwa akwụkwọ na-enwu gbaa, onye mara ezigbo mma ọkachasị na mgbakọ na mwepụ na sayensị.
Little Thomas gbara bọọlụ n'ụlọ akwụkwọ, n'oge ụlọ akwụkwọ Liverpool nwere nsogbu na agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ na-ewere ụmụ akwụkwọ kachasị mma.
N'oge ahụ, ndị nne na nna Tom Davies chere na nwa ha nwoke ekwesịghị imebi agụmakwụkwọ ya maka football.
Ma Daine na Tony chọrọ obere Tom ka ha ruo ogo mahadum. O di nwute, ihe agagh adi ka ha siri choghi ekele maka akara aka.
'Uncle Tom Davies' Deede nwere ya:
Ọbụna mgbe ejiri agụmakwụkwọ dị mkpa nke ukwuu, ịhụnanya Tom nwere maka football meriri n'ihi mkpali sitere n'aka otu nwoke.
Ọ bụ ihe ọzọ karịa “ya na Deede- Alan". Ị maara?… mkpụrụ ndụ ihe nketa nke football na-agbakwa n'ezinụlọ Tom Davies site na nwanne nna ya a ma ama, Alan Nwokocha Alan (foto dị n'okpuru) onye Tom yiri ihu maka Everton na Crystal Palace na 1970s.
Zute Tom Davies Uncle, Alan Whittle- Kedu ihe ị chere banyere ọdịdị ha? AJ:: Twitter
Alan Whittle nyeere obere Tom Davies aka ịbụ onye a ga - agụ na bọọlụ nwata akwụkwọ Merseyside.
Ewepụ ụlọ akwụkwọ, Davies weghaara akara ya n'aka ya oge niile na-etinye amamihe ya na mpaghara bọọlụ mpaghara West Derby.
Tom Davies Ndụ Ndụ Mmalite:
Onyinye football nke Davies pụtara n'oge oge esemokwu n'etiti agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ na usoro egwuregwu bọọlụ nke Merseyside.
N'oge ahụ, sistemụ ụlọ akwụkwọ Merseyside na-akụda ikike ha nwere site na isonye na agụmakwụkwọ bọọlụ. Nke a bịara n'ihi na ọ na-adịkarị ha ka ha bụ ndị e kewapụrụ iche na ikewapụ.
Little Davies metụtara n'ihi na ọ nwere olile anya ịbanye na agụmakwụkwọ na n'otu oge ahụ, sonye na bọọlụ ụlọ akwụkwọ.
Enwere naanị otu nhọrọ maka ya, ọ bụ ma ọ sonyeere agụmakwụkwọ ma ọ bụ gaa n'ihu bọọlụ ụlọ akwụkwọ.
Na njedebe, nne na nna Tom Davies kwadoro ya ka ọ pụọ n'egwuregwu ụlọ akwụkwọ iji sonyere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Tranmere Rovers dị na Liverpool.
Tom Davies 'Biography- Roadzọ ya nke Maara Aha Akụkọ:
N'ịghọta ọchịchọ nwa ha nwoke ịgba bọl maka ndụ, ndị ezinụlọ Tom Davies karịsịa nwanne nna ya mere ihe niile ha nwere ike iji kwado ọchịchọ ya.
Mgbe ọ nọ na Tranmere Rovers, obere Tom mepụtara ghọọ mara mma whiz nwa. Ofzọ o si egwu dọtara agụmakwụkwọ bọọlụ Everton, otu n'ime klọb bọọlụ abụọ nke England sitere na Liverpool.
N'afọ 2009 mgbe ọ dị afọ 11, Tom enwetala aha ya na ndepụta nke agụmakwụkwọ Toffee mgbe ya na klọb mechara nwee ihe ịga nke ọma. N'okpuru ebe a, ọ bụ ezigbo ọ ofụ maka onwe ya na ndị ezinụlọ ya.
Na-eto eto ma nwee obi ụtọ Tom n'afọ 2009- Afọ ọ sonyere Everton. Ebe E Si Nweta: FPCP-Blogspot
Eziokwu bụ, tebe a enweghi ihe ịga nke ọma n'abalị na agụmakwụkwọ Everton. Enwere ihu ọma Davies ekele maka ntozu okè ya na ndu o nwere.
Ị maara?… Omume ya na ụdị egwuregwu ya hụkwara ka a kpọrọ ya na England U16 mba otu n'afọ 2013.
Dị ka a tụrụ anya ya, Davies nọgidere na-ebili n'ọkwá mba, ghọọ onye isi ntorobịa England na usoro ahụ.
Tom Davies 'Biography - Nbili Ya Na-ewu ewu Akụkọ:
Kemgbe oge Davies buru onye ntorobịa England, ọganihu ya aghọọla nke nwere olileanya ịgabiga n'okpuru Roberto Martinez onye weghaara ọchịchị David Moyes. N'oge oge 2014-15, ọ kwalitere Everton-n'okpuru 21s.
Ná ngwụsị nke oge ahụ, ọ bịanyere aka na nkwekọrịta nkwekọrịta mbụ ya, oge ọ joyụ maka nwanne nna ya, ndị nne na nna na ndị ezinụlọ ya.
Tom Davies dị egwu na otu U21 nke Everton nyere ya ụgwọ mbụ ya na Premier League site n'aka onye njikwa Roberto Martínez.
Nwa nwatakiri a, n'ihi ekele nke n'okporo ámá ya na ihe ojoo nke umuaka umuaka nke ulo akwukwo malitere n'oge.
Sunday nke 15th nke Jenụwarị 2017 ka bụ ụbọchị dị oke mkpa na Tom Davies Biography nke ọ na-agaghị echezọ. Ọ bụ ụbọchị ọ mezuru nrọ nwata ya site na ịlele ihe mgbaru ọsọ ọkachamara mbụ ya maka Everton megide Manchester City.
Foto nke dị n'okpuru ebe a, Davies gosipụtara oke obi mmụọ mgbe ọ gbasasịrị bọọlụ dị mma n'elu ọsụsọ ahụ Claudio Bravo iji mara ihe mgbaru ọsọ mbụ ya.
Omume ya na ọnwa ahụ mere ka ọ bụrụ Jenụwarị PFA Fans 'Player of the Month na Young Player of the Season award.
Echiche nke oge ahụ echefu echefu Thomas meriri ihe mgbaru ọsọ mbụ ya dị ka onye ọkpụkpọ ọkpọ. AKA: Oge na DailyMail
Ngwa ngwa rue oge edere Tom Davies Biography, anyị nwere ike iji obi ike kwuo na ndụ ya agbanweela.
O doro anya na ọ bụghị onye na-agba ọsọ nke ọma ma gbanwee ka ọ bụrụ nwa okorobịa chọrọ. Tom agafeela ịnọchite anya ụlọ ọ hụrụ n'anya (Everton) oge 74 tupu ụbọchị ọmụmụ ya 21st.
O doro anya na anyị bụ ndị egwuregwu bọọlụ na-achọ ịhụ maestro midfield ọzọ na-eto eto ka ọ banye na ọkwa ọkwa ụwa n'ihu anya anyị.
Tom Davies bụ otu n'ime ihe kachasị mma n'etiti usoro na - enweghị njedebe nke ndị etiti na - esi England pụta. Ndị ọzọ, dịka anyị kwuru, bụ akụkọ ugbu a.
Ọnye na-bụ Tom Davies 'Girlfriend?
Site na ịrị elu ya na ịbụ onye mara mma, o doro anya na ụfọdụ ndị Everton na ndị England ga-echeworị onye enyi nwanyị Tom Davies nwere ike ịbụ.
Ma ọ bụ na ọ lụrụ di na nwunye, ya na nwunye ya na ụmụaka. Eziokwu bụ, ịgọnahụ eziokwu ahụ na ọdịdị mara mma nke Tom agaghị eme ya A-Nwanne nwanyị maka inwe enyi nwanyi na ihe ndi nwunye. Dị ka Philippe Coutinho.
Everton na England Fans jụrụ- isnye bụ Tom Davies Dating? O nwere enyi nwanyi? ma obu nwunye?. Ebe E Si Nweta: IG
Mgbe anyị nyochachara ọtụtụ ịntanetị, anyị ghọtara na Tom Davies nwere ike ịlụ di ma ọ bụ nwunye (dị ka n'oge edere).
Tom Davies 'Ndụ nke Onwe:
Tomata Tom Davies Ndụ Nkeonwe. Ebe E Si Nweta: Instagram
David Beckham, Thierry Henry, Andrea Pirlo Ha niile nwere ezigbo obi uto ebe ndi ozo n’egwuregwu bọọlụ adighi eme (onweghi iwe Danny Drinkwater!). Tom Davies bụ otu nwoke nke gosipụtara ụwa ahụ- don'tkwesighi ịbụ onye nkwenkwe ụgha buru ibu ka ị dịrị jụụ.
Ọbụna na Skateboards ya, ogologo ntutu, uwe ndị na-acha ọcha, ọdịdị dị iche, a ka na-echekwa ụdị Tom na pitch.
Tom Davies bụ ọgwụ na-egbochi ọha mmadụ nkwenye zuru oke (Stereotype) banyere ụdị egwuregwu ndị na-agba ọsọ na ike ha ịbụ ndị isi.
N'agbanyeghị na ya dị egwu, Tom nke anyị, n'ọtụtụ oge ghọrọ onye ndu na egwuregwu ahụ. Ị maara?… Tom Davies bụ onye isi, ma ndị ntorobịa England na ma ndị otu nnukwu Everton.
N'ikpeazụ, na ndụ onwe Tom Davies, onye etiti etiti bụ onye na-enwe mmetụta nke ọma na ụdị nke ya. Ọ naghị achọ ka ndị ọzọ na-achị ya.
Tom kwenyere na ọ dị ya mkpa ịdị mma na ihe ọ na-eme kama ịrapara n'ihe ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ; ndi choro ka o dowe ogologo aka ma wedata ntutu ya) choro ya ka o mee.
Tom Davies 'Ndụ:
Mata Tom Davies Ndụ ya na ọdụ ahụ. Ebe E Si Nweta: Instagram
Tomata ụdị ndụ Tom Davies na-ebi ga-enyere gị aka ịmata etu o si ebi ndụ.
Malite, ị ga-ekwenye na ọ bụ tọ kacha mma na agba bọọlụ mgbe niile na ụwa niile. Dị ka n'oge edere, Davies adịghị ebi ndụ okomoko ụgbọ ala flashy mara mma, nnukwu ụlọ (nnukwu ụlọ) wdg.
Dị ka e kwuru n'elu, nke Tom n'agbanyeghị ụgbụ ya na uru ahịa ya ka na-ahọrọ ịnya igwe a haziri ahazi dị ka ụgbọ ala ya.
Nke a bụ ihe ịrịba ama nke ndụ ya dị umeala n'obi. Tom anaghị ezochi eziokwu na ọ na-akwado FC Barcelona ọbụna dịka onye ọkpụkpọ Everton. Ọ hụrụ ihe egwuregwu PlayStation, nke ọ na-egwuri egwu Dominic Calvert-Lewin (ezigbo enyi ya).
Tom Davies ' Ndụ Ezinụlọ:
Onye ọ bụla nọ na Liverpool na-enwe mmasị na ya mgbe mmadụ si n’obodo ahụ na-eme nke ọma, yabụ na ọ bụghị naanị ezinụlọ Tom Davies na-anya isi maka ihe ọ rụzuru.
Ndị si n'obodo Liverpool na-enwe mmụọ mgbe ha hụrụ na ha na-eme nke ọma. Ihe omuma atu ohuru bu; John Lundstram na Chris Wilder ndị na-aga n'ihu n'asọmpi bọọlụ bekee.
N'akụkụ a, anyị ga-enyokwuo ọkụ na ndụ ezinụlọ, na-ele anya na otu n'ime nne na nna Tom Davies- nne ya.
More banyere Tom Davies 'Mama:
Daine Davies bụ onye na-eme ntutu isi ama ama na Liverpool na nnukwu mama nke Tom Davies. Daine bụ ụdị nne na-enwe mmasị na nwa ya nwoke.
Davies gwara Daily Mail na azụ na agụmakwụkwọ ya, mama ya achọghị ichebe ime ụlọ ntutu ya ka emechie ya iji mee ka ọ gaa Finch Farm (Ogige ọzụzụ Everton).
Nke a mere ọbụna mgbe ọ bụ onye ọkpụkpọ kachasị egwu mana agafebeghị ule ọkwọ ụgbọala ya. N'ajụjụ ọnụ, Davies kwuru otu oge banyere nne ya;
"Mama m na-akpọbata m kwa ụtụtụ wee tụda m, ”Ka Davies kwuru, jiri nnukwute ihu dị n'ihu ya. Mgbe a jụrụ ya ndị otu egwuregwu ibe ya na-akwa emo maka ya, ọ zara, sị: “Ee, mana ahụghị m ihe ọ bụla dị njọ na ya!"
Djibril Sidibe Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu
More gbasara nna nna Tom Davies:
Tony Davies bụ ezigbo nna nke Tom. Ọ bụ ụdị nna na-enwe mmasị ịnwe nwa ya nwoke Davies gburugburu ya ebe ha abụọ na-ele egwuregwu ya ọnụ.
Dị ka Telegraph, Davies kwuru n'otu oge na mgbe ọ gasịrị ihe mgbaru ọsọ mbụ ya, ọ gara n'ụlọ ezinụlọ ya ka ya na nna ya (Tony) hụ egwuregwu ahụ.
Ma nna ma nwa nwoke ewulite mmekọrịta dị egwu, nke edobere ruo mgbe ebighi ebi.
Banyere Nwanna Tom Davies 'Liam:
Ndị nne Tom Davies enweghị ya dị ka naanị nwa ha mụrụ. Onye na-agba ọsọ na Bekee na-eto eto nwere nwanne nwoke okenye nke na-akpọ aha ya Liam Davies kwuru.
Nwanne Tom Davies dị ka ya onwe ya gakwara egwuregwu. Dabere na Wikipedia, Liam bụ onye ọkpụkpọ egwuregwu bọọlụ ọkara na-egwuri egwu maka Curzon Ashton.
Akụkọ ọzọ nwere na Liam bụkwa ezigbo Onye siri nri nke na-esi nri ụdị nri dị iche iche na pasta pasta ya na cheese parmesan.
Banyere nwanne nna Tom Davies:
Zute Tom Davies 'Uncle, Alan Whittle- Kedu ihe ị chere banyere ọdịdị ha
Alan Whittle bụ nwanne nna Tom, onye anyị kwuru na ọ bụ ya kpatara ọrụ Davies, na-eme ka ọ dịkwuo mma dị ka onye na-egwu egwu.
O doro anya, Tom Davies bụ nwa nwanne nwoke nke onye ọkpụkpọ Everton mbụ mere egwuregwu 74 maka klọb ahụ n'etiti 1967 na 1972.
Eziokwu Tom Davies:
N'akụkụ a nke Tom Davies Biography, anyị ga-ewetara gị ụfọdụ eziokwu akụkọ banyere Liverpool nke amụrụ bọọlụ na West Derby.
Eziokwu # 1- Tom Davies Dakwụsị ụgwọ ọnwa na sekọnd:
N’ọnwa mbụ nke afọ 2019, onye England ahụ bịanyere aka na nkwekọrịta na Everton, otu nwere ego akwụkwụ nke £ 1,293,684 (Nde Pound) kwa afọ.
Crunching Tom Davies ụgwọ ọnwa n'ime enwetakwa kwa sekọnd, nkeji, oge awa, ụbọchị, wdg,… anyị nwere ndị na-esonụ;
Ego Tomrey Davita na Pound (£)
Dagwọ ọnwa Tom Davies na Euro (€)
Dagwọ ọnwa Tom Davies kwa afọ £ 1,293,684 € 1,500,000
Dagwọ ọnwa Tom Davies kwa ọnwa £ 107,807 € 125,000
Dagwọ ọnwa Tom Davies kwa izu £ 26,294 € 30,488
Dagwọ ọnwa Tom Davies kwa ụbọchị £ 3,534 € 4,098
Dagwọ ọnwa Tom Davies kwa elekere £ 147 € 171
Dagwọ ọnwa Tom Davies kwa nkeji £ 2.45 € 2.85
Dagwọ ego Tom Davies Kwa Sekọnd £ 0.04 € 0.05
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Tom Davies'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Nwa nwoke n’etiti UK kwesịrị ịrụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 3.6 iji kpata £ 107,807, nke bụ ego Tom Davies na-enweta na naanị otu ọnwa.
Eziokwu # 2- Banyere Tom Davies:
Ihe kpatara Tom Davies 'Hair. Ebe E Si Nweta: SB-Nation, Zimbo na EvertonFC
Obi abụọ adịghị ya, ogologo ntutu ogologo ya na-eme ka ọ mata ya ozugbo na pitch. Eziokwu ahụ bụ na ndị otu ezinụlọ Tom Davies na-akwado ntutu isi ya nyere onye ọ bụla na-eto eto ọzụzụ ngwa ọgụ niile ka ọ kụọ ya.
Nke a bụ n'ihi na o chere na ntutu sitere na Daine, nne ya, na onye na-edozi isi. David Unsworth [Onye nkuzi Everton Under-23s] na-enye Davies nnukwu mkpanaka maka ntutu ya, na-agwa ya mgbe niile ka ọ gbasaa. Mgbe a jụrụ ya banyere ntutu isi ya, Tom kwuru otu oge;
Amalitere m ntutu m ịmalite afọ ole na ole gara aga, wepụ ya. Na mberede, achọfuru m ya, n'ihi ya, m na-eto ya. ”
Onye na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ nke Premier kwuru na mgbe ọ na-ekwenye ekwenye na nne ya, Diane, bụ onye na-edozi isi.
Eziokwu # 3- Ihe kpatara Tom Davies ji ebu obere akpa:
Anyị na-agwa gị ihe kpatara etiti etiti ji eyi obere ebuka?. Ebe E Si Nweta: Zimbo
Site na ntutu ya ruo na ajị isi ya na-enweghị isi wee ruo na obere mkpụmkpụ ya, Tom Davies na-ejide echiche nke onye na-agba bọọlụ nwere mmụọ n'efu.
Ị maara?… 'Slọ akwụkwọ ochie nke Tom, obere sọks na-adịghị mma na-akpali nna nna ya, Alan Whittle. Ee, ọ na-eme nke ahụ iji sọpụrụ nwanne nna ya bụ Alan Whittle onye na-ebu obere ebuka n'oge ọ nọ na Everton.
Ruo ugbu a, ọtụtụ na-atụle ọ bụghị naanị Tom, kama ndị ọzọ na-agba ọsọ dị ka Jack Grealish nke siri ike n'ihi mkpebi siri ike ha ime ka sọks banye n'ọgba na-egbu maramara.
Eziokwu # 5- Tom Davies FIFA ọnụego:
Davies mgbe ọ dị afọ 21 (ka nke Feb 2020) nwere ikike ịbụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ Bekee kacha mma na FIFA. Onye na-ahụ maka egwuregwu etiti nwere asọmpi ikike FIFA nke 82, na-eme ka o doo anya ịzụta maka ndị hụrụ egwuregwu FIFA n'anya.
Onye etiti etiti nwere ezigbo ikike FIFA, n'ezie otu maka ọdịnihu. Ebe E Si Nweta: SoFIFA
Eziokwu # 6- Tom Davies Tattoos:
Tom n'oge a na-ede akwụkwọ ekwenyeghị na Ogbugbu nke egbugbu nke ama ama n’egwuregwu egwuregwu taa. Foto dị n'okpuru ebe a, onye ọkpọ ọkpọ anaghị achọ inks na ahụ ya na elu ala iji kọwaa okpukpe ya, ihe ndị ọ hụrụ n'anya ma ọ bụ ndị ezinụlọ ya.
Tọmọs nke anyị ekweghị (n'oge edere) na-enweghị Tattoos. Ebe E Si Nweta: Instagram
Eziokwu # 7- Tom Davies Okpukpe:
Tom Davies ezigbo aha “Thomas”Bụ aha e si na Baịbụl nweta ya. Inwe aha a na-egosi na nne na nna Tom Davies nwere ike ịbụ Ndị Kraịst.
N'oge ederede, ọ nweghị ihe ịrịba ama ọ bụla na Tom dị ukwuu n'okpukpe. Otú ọ dị, anyị ga-emelite gị ozugbo enwere ihe ngosi foto na-egosi omume okpukpe Ndị Kraịst ya.
Tom Davies Biography Eziokwu (Enquiries)
Aha n'uju: Thomas Davies (ezigbo aha ya)
aha otutu: Tom
Ụbọchị ọmụmụ: 30 nke June 1998
Ebe amụrụ onye: Liverpool, England
Age: 21 (Ka ọ bụ na February 2020)
Ebe o toro: West Derby (East nke Liverpool, England)
Aha nne na nna: Daine Davies (mama) na Tony Davies (Nna)
Ụmụnne: Liam Davies (Nwanna Okenye)
Music Music ọkacha mmasị: Ndi eze Leon
Nri ọkacha mmasị: Pesto pasta na parmesan chiiz.
Ezi enyi: Dominic Calvert-Lewin
elu: 5 na 11 na (1.80 m)
-arụ: Onye nyochaa
Egwuregwu Ọnọdụ: Onye etiti etiti
Mmụta Bọọlụ Bọọlụ: Egwuregwu ụlọ akwụkwọ na Tranmere Rovers
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Tom Davies Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.